Warbaahinta Mareykanka oo sheegtay in uu dhintay wiil uu dhalay Osama Bin Laden | Xaysimo
Home War Warbaahinta Mareykanka oo sheegtay in uu dhintay wiil uu dhalay Osama Bin...
Warbaahinta Mareykanka oo sheegtay in uu dhintay wiil uu dhalay Osama Bin Laden
Warbaahinta dalka Mareykanka oo soo xiganaya ilo sirdoon ayaa ku soo waramay in uu dhintay wiil uu dhalay hogaamiyihii Al Qaeda, Osama Bin Laden, kaas oo lagu magacaabo Hamza bin Laden.
Warbaahinta NBC ayaa sheegtay in mas’uuliyiinta aysan dhimashada Hamza ka bixinin fahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaabka uu u dhintay iyo halka uu ku dhintay.
Hamza bin Laden oo da’diisa lagu qiyaasay 30 sano ayaa dad badan waxay u arkayeen in uu yahay qof badeli kara xilkii uu aabihii ka hayay dhaqdhaqaaqa ururka al-Qaeda.
Sanadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii uu shacabka Carbeed uu ugu baaqay inay kacdoon sameeyaan, waxaana Dowladda Sacuudiga ay kala laabatay dhalashada dalkaas.
Dowladda Mareykanka ayaa sanadkii hore sheegtay in lacag dhan hal milyan oo doolar ay siin doonta qofka soo sheega halka uu ku sugan yahay Hamza.
Osama bin Laden ayaa sanadkii 2011-ka waxaa dalka Pakistan ku dilay ciidamo gaar ah oo Mareykan ah.
Osama wuxuu ansixiyay weerarradii Maraykanka lagu qaaday 11 Sabteembar ee sannadkii 2001, kuwaas oo lagu dilay ku dhawaad 3,000 oo ruux.
Dowladda Mareykanka ayaa saddex sano kahor liiska argagixisada Xamze Bin Laden oo ay u arkayeen in uu yaha qof liddi ku ah ammaanka Mareykanka.